Ra’iisal wasaare Kheyre oo dhawaan booqasho ku imaan doona Norway iyo walaac daran oo safarkiisa laga muujiyay | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Ra’iisal wasaare Kheyre oo dhawaan booqasho ku imaan doona Norway iyo walaac...
Ra’iisal wasaare Kheyre oo dhawaan booqasho ku imaan doona Norway iyo walaac daran oo safarkiisa laga muujiyay
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa dhawaan ku booqasho ku imaan doona magaalo madaxda Norwey ee Oslo, halkaan oo uu ra’iisal wasaaruhu ugu qeyb gali doono kulan caalami ah oo loogaga arrinsanaayo ammaanka caalamka.
Booqashadan oo ah tii ugu horeeysay oo uu ku iman doono Norway oo uu dhalasho ka heysto, tan iyo markii loo magacaabay ra’iisal wasaare, ayaa dadka qaar waxaa ay ka qabaan, walaac la xirriira celinta qaxootiga Norwey ee loo diiday magangalyada iyo kuwo dhawaan iyagana laga ceshtay dal ku joogga.
Walaacan ayaa salka ku haya tuhun laga qabo in Norwey ay heshiis dib loogu celinayo qaxootiga soomaalida la gasho Ra’sulwasaare Kheyre oo uu isna saxiixo.
Waxaa jiray warar la isla dhexmarayey oo sheegayey in wefdi ka tirsan dowladda Soomaaliya oo horey u gaaray Denmark ay heshiis dib loogu celinayo qaxootiga soomaalida la gashay.
Denmark ayaa soomaalida ku dhaqan waxaa ay mudooyinkii ugu dambeeyay hareeyeeey dhibatooyin la xirriira dib u celinta dad gaaray 16.00 qaxooti soomaali ah, kuwaas oo dowladu sheegtay ineey dub ugu celineeyso Soomaaliya.
Waxeey Denmark sidoo kale sheegtay ineey qiimeyn ku sameeyneyso xaaladda qeybo ka mid ah Soomaaliya oo ay Norwey iyo Denmark aaminsan yihiin ineey amni ka jiraan.
Shacabka ku dhaqan magaaladda Oslo ayaa sheegay in babaanbax cabasho ah laga sameeyn doon Norwey taas oo ku aadan imaantinka wefdiga soomaalida.
Soomaalidaku dhaqan dalalka Skaandaneefiyanka ayaa la filayaa ineey ka qeyb qaataan banaanbaxaasi cabashada ah.